Chakhokhbili izinkukhu multivarka ekulungiseleleni pretty masinyane. Esihlokweni samanje, sizokutshela mayelana nendlela ukudla kungenziwa ngezindlela ezahlukene.
Ngaphambi kokuthi ngikuxoxele kanjani ukupheka chakhokhbili izinkukhu multivarka, kufanele ungitshele ukuthi konke lokhu kuyinto kwasemini.
Chakhokhbili - kungcono simnandi kakhulu futhi kwanelise isidlo Georgian. Ekuqaleni kwalo enziwe inyoni ye-pheasant inyama. Namuhla, ukulungiswa izitsha emizi ziya ziba mandla ekusebenziseni inkukhu.
Ngakho, wathi isidlo Georgian kuyinto izingcezu steamed izinkukhu, kuphekwe utamatisi sauce.
Njengoba kushiwo ngenhla, chakhokhbili izinkukhu e multivarka ekulungiseleleni bekulula. Futhi ngokomfanekiso esidlweni esinjalo kwakwehla esiphundu kakhudlwana futhi flavorful, umkhiqizo inyama Kunconywa Fry esitsheni ezomile, ngaphandle kokunezela kulo amanoni noma uwoyela. Kufanele kuqashelwe ukuthi lokhu umthetho esiyinhloko ukulungiswa kwakusihlwa wathi.
Iphuzu lesibili esiyinhloko siwukuthi ngesikhathi eqeda we Georgian sokudla okwehla esiphundu epanini akufanele engeza amanzi eyengeziwe ukuphuza. Lokhu kungaba ngokuphawulekayo zilulaza ikhwalithi ukunambitheka kokudla.
Ngakho, chakhokhbili izinkukhu multivarka kufanele sikadali in juice ayo kuphela, okungukuthi ku ketshezi, okuyinto isehlane ngokwabo imifino kanye nemikhiqizo inyama.
Ebona lokhu izimo, uqiniseka ukuthola dish eqotho kakhulu, flavorful futhi esihlwabusayo.
Chakhokhbili: iresiphi multivarka e "Polaris"
Lapho sichaza ngenhla, emelelwa isidlo kakhulu nje uzilungiselele, kodwa esihlwabusayo ngokumangalisayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi umndeni ngamunye has iresiphi ayo, kanye izimfihlakalo zayo ukupheka lokhu isidlo. Ngamunye wabo Kuyathakazelisa ngendlela yalo. Sanquma ukwethula wena ithandwa kakhulu futhi elula ngazo uzokwazi eqotho futhi esihlwabusayo ukondla umkhaya wayo.
Njengoba silungiselela inkukhu ithoswe yathamba e utamatisi juice (chakhokhbili)? Multivarka iresiphi kudinga ukuthi imikhiqizo alandelayo:
chilled inkukhu broiler - 1 kg;
utamatisi okuzenzela noma esitolo in juice yabo - 400 g;
Onion elikhulu elimnandi - 1 pc.
naphakathi ulwandle usawoti, pepper othulini, amakhambi fresh - esetshenziswa ukunambitha;
Refined amafutha yemifino - ukusebenzisa ngokubona.
Ukuze ufunde indlela ukupheka chakhokhbili e multivarka, bambalwa bayazi. Yingakho sanquma ngikuxoxele esihlokweni samanje.
Ngaphambi kokuya lapho kulungiselelwa lokhu dish, zonke izingxenye kufanele kuthathwe kusengaphambili. Okokuqala sidinga uhlanze inkukhu kusukela izakhi ezingadingekile, bese nquma laba izicucu enkulu ngamathambo.
Uma inkukhu icutshungulwe, kufanele uqhubeke ne ukulungiswa imifino. Anyanisi kufanele ahlanze kusukela husk, bese uthathe izindandatho uhhafu. Ngokuqondene utamatisi in juice yabo, badinga nje evulekile.
By endleleni, uma multivarka chakhokhbili e "Polaris" unquma ukwenza ehlobo phakathi noma sekwedlule isikhathi, uma imibhede uvuthwe utamatisi, imifino ekheniwe kusukela ikani futhi ingabe ukwenqaba. Phela, lokhu dish kunambitheka kangcono kakhulu eyatholakala kusukela utamatisi yemvelo futhi fresh.
Ukulungiselela chakhokhbili e multivarka hhayi isikhathi. Futhi afakazele lokhu, singaqiniseka ukuthi yenze eyakho. Ukuze uqalise ekhishini iyunithi umthamo kufanele engeza namafutha amancane ocacile ukufudumeza ke imodi batch. Uma amafutha yemifino uzoqala sizzle, kuyadingeka ukubeka ingxenye-amasongo onion, bese Fry it ohlelweni elanikezelwa ezifakwe.
Lapho imifino kuphekeke kahle, kubalulekile ukuba adlulele ipuleti, bese ubeka isitsha Multivarki ngaphambilini imibengo inkukhu. it is hhayi Kunconywa ngenkathi ngaphezu kwalokho ngokungeza uwoyela noma amafutha.
Ngenxa yalokho, inkukhu kufanele iphekwe inqobo nje uma embozwe uqweqwe segolide. Futhi le gazinga inyoni okungcono, tastier uthola isidlo Georgian.
ukwelashwa ukushisa cuisine Georgian
Ngokufeza konke lezi zinyathelo, ukuze izithako inyama kudingekile ukubeka utamatisi in juice yabo. Ukudla adingakala godu ukunambitheka pepper nechobozekile, amakhambi fresh and uLwandle Lukasawoti.
Ukubeka zokucisha hlelo, imikhiqizo kumele ikhiqizwa ngaphandle kwezindleko ezinkulu ukwengeza amanzi eyengeziwe ukuphuza isigamu sehora. Lesi sikhathi kumele kwanele ukuba isifundazwe ukuqinisekisa ukuthi inkukhu uye ithambe ngokuphelele futhi ugxile kahle zonke flavour of utamatisi sauce kanye nezinongo.
Kahle ukukhonza isidlo Georgian etafuleni umndeni
Manje uyazi ukuthi ungakwazi ngokushesha futhi kalula enze chakhokhbili bazisebenzisa ekhishini Imishini njengoba multivarka "Polaris". Zonke inqubo ngenhla kungase kuthathe nawe mayelana 45-50 imizuzu isikhathi khulula. Yingakho lesi isidlo othandwa kakhulu phakathi kwalabo abakhetha ukwenza isidlo esimnandi futhi eqotho, hhayi ngokufaka isicelo kulo mzamo okhethekile futhi ngaphandle kokukhokha isikhathi esiningi.
Uma inkukhu kanye utamatisi sauce idina uzolunga, kubalulekile ukuba uhlele phezu kwezitsha futhi ukukhonza amalungu omndeni. Chakhokhbili ngokuvamile babekhonza itafula ngaphandle Hlobisa. Ngemva kokudla Georgian isidlo ephelele ukuthi ziphele kanye nocezu lwesinkwa fresh noma Pita obukhulu. Ujabulele ukudla kwakho!
Senza amazambane chakhokhbili e multivarka "Redmond"
Ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani isidlo zakudala Georgian ngaphansi ezithakazelisayo igama chakhokhbili, sabatshela ngenhla. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi zikhona ezinye izindlela ezintsha zokulungiselela ukudla kwakusihlwa. Isibonelo, uma ufuna ukuthola ukudla okwanelisa kakhudlwana nokunomsoco, ngaphezu inkukhu notamatisi, kungaba ukungezwa futhi iyiphi imifino. esihlwabusayo kakhulu chakhokhbili etholakala nge amazambane, izaqathe kanye eziningi amakhambi fresh. Ungenza kanjani ukuthi lena isidlo, ungafunda kusuka Indlela eqondile elandelayo.
chilled inkukhu broiler - 1.5 kg;
utamatisi fresh usayizi esikhulu - mayelana 4 PC.
Onion elikhulu elimnandi - 2 amakhanda;
naphakathi ulwandle usawoti, pepper, nengulube - zisebenzisa ukunambitha;
cilantro, basil, iparsley fresh - at-ugongolo isilinganiso;
isanqante ezinkulu - 1 pc.
ugarliki - 4 PC.
amazambane amancane - 3 PC.
Semi-eyomile newayini elibomvu - 50 ml ;;
Uphinde agibele-suneli - ukusebenzisa ukunambitheka yakho;
amafutha omnqumo elicwengiweyo - ukusetshenziswa ngokubona.
Ngaphambi ukupheka e multivarka chakhokhbili "Redmond", ngomusa aphathe inkukhu selehlile. Kufanele kuqashelwe ukuthi ingxenye ohluke ngokuphelele le nyoni angathengwa ukulungiswa kwakusihlwa. Sincoma ukuthatha umbala noma kwamathanga, njengoba nje kuvamile namanje inyama okumnandi.
inkukhu Ngakho chilled kumele kahle siyakazwe, bahlanza of izinto okungafunwa, bese uthathe yizicucu ezinkulu. Ngemva kwalokho, umkhiqizo inyama liyadingeka ukunambitheka izinongo futhi ushiye eceleni isikhashana.
Ngokuba ukulungiswa izitsha Georgian kufanele kahle kusetshenzwe hhayi izinyoni kuphela, kodwa futhi wonke uthenge imifino. Kufanele wageza, sihlanza bese uqhubekela phambili ukugaywa. Onion ama ebezidinga uthathe izindandatho uhhafu, amazambane, ihlukaniswe 4 tincetu, izaqathe kanye grate on grater ezinkulu. Ngokuphathelene utamatisi fresh, kufanele scalded ngamanzi abilayo, bese ukususa zonke ikhasi nquma at cubes aphakathi.
Phakathi kwezinye izinto, kufanele eceleni ochotshoziwe ugarliki futhi wonke amakhambi fresh.
Njengoba kushiwo ngenhla, wokulungiselela isidlo esihlwabusayo wabe esethi okunempilo Georgian izingxenye zalo eziyinhloko kufanele kube pre-gazinga. Ukuze wenze lokhu, kumele multivarku uthele amafutha yemifino wayesezibeka isigamu amasongo onion. Fry imifino Kunconywa baking isikhathi.
Ngemva umkhiqizo kuphekeke, kuyadingeka ukuthuthela ipuleti ehlukile, bafakwa inkukhu booster. Heat-aphathe isithako kufanele ibe esimisweni esifanayo, kodwa ngaphandle kwalokho lamafutha.
Fry izingcezu inkukhu imodi ukubhaka, kufanele uzilungiselele kusenesikhathi ukubeka anyanisi kanye izaqathe ogayiwe, amazambane lisikiwe futhi utamatisi oqoshiwe. Hlanganisa wonke izithako adingekayo ukunambitheka izinongo zabo, bese ufake uhlelo "wokukucima" niyilungise for isigamu sehora.
Ngemva kwesikhath wesikhathi wathi isidlo kufanele wengeze zonke amakhambi oqoshiwe nesweli oqoshiwe. Govuza izithako badinga ukuma ngaphansi kwezimo ezifanayo imizuzu 5 futhi.
Ngemva multivarka likhipha kuwuphawu lokuthi uhlelo ihlaliswe phansi, kwasemini ongakhonza ngokuphepha.
Chakhokhbili kahle ungeniswe kumphatsi wesifundvo umndeni dinner
isidlo Georgian esekelwe inkukhu, utamatisi nezinye imifino uthole zinikwa ngcono kakhulu kunalokho ayekulindele okwethulwa ngayo ekuqaleni kwalesi sihloko. Ngemva idina usulungile, kufanele basakaza phezu ipuleti futhi ngokushesha kusebenza amalungu omndeni. Njengomthetho, isidlo ezinjalo kwethulwa, kanye izingcezu isinkwa isaladi ahlanzekile.
Uma ufuna ukunconywa futhi esihlwabusayo ukudliwa yiwo wonke amalungu omndeni wakhe, khona-ke sinikeza ukwenza isidlo nje vyshepredstavlennoe. Okokuqala, iphekwe ngokushesha okukhulu. Okwesibili, idina akudingi ukuthengwa izithako ezibizayo. Okwesithathu, ivuthwa kahle chakhokhbili Georgian kuba ezihlwabusayo ngakho futhi elimnandi, ukuthi ngeke bakwazi benqaba ngisho umuntu fastidious kunazo ozalwa. Ukuze uqinisekise loku, siphakamisa ukukwenza ngokwakho.
Sponge ikhekhe ngaphandle amaqanda. amabhisikidi Homemade: zokupheka elula
TGM-4 Ukucaciswa, imiyalelo yokusebenzisa